MAHAFINY MiG-23 Flogger FSX & P3D
Miaramila MiG-23 FLOGGER an'ny Alphasim, nohavaozina FSX/P3D jiro vita amin'ny marika MDL X ary ny fitaovana. Ny fivarotana ivelany ivelany amin'ny fahitana fahitana mavesatra, afa-tsy ny fitokonana fitokonana: Droptank amin'ny fahazoana lanja amin'ny alàlan'ny mpiandraikitra ny karama, fivarotana nokleary RN28 amin'ny fitrandrahana zavatra avy amin'ny sidina voavonjy.
AS6 Karen ASM hisongadina avy voavonjy sidina. Balafomanga mampiasa balafomanga solution2 maimaim-poana.
Sidina maro voasoratra anarana no tafiditra amin'izany add-on (jereo ny My Documents or Documents).
Anisan'ny 6 repaints:
Asio Red-479 (N) ny 190th Fighter rezimanta, Kanatovo AB c.1987
Fa mena-479 (AS) ny 190th Fighter rezimanta, Kanatovo AB c.1987
Yellow-49 unk VVA Fighter rezimanta, c.1987
Yellow-49 fitokonana loadout, unk VVA Fighter rezimanta, c.1987
Asio Mena-58, AS-6 ny ASM
Drag chute: F lakile (mampiasa wingfold didy, dia tsy mahatonga misy sembana)
Mitsingevaheva elany: mikopaka fanalahidy (F5 - F8)
Modelin'i Alphasim, FSX Fiovan'ny LLS